Anti-soluble ụfụfụ emenyụ gị n'ụlọnga 6% S / AR
HS Usoro: 38130010
6% ụdị mgbochi soluble ụfụfụ Fire emenyụ Ukwu bụ a ukwuu oru oma environmentally friendly ọku emenyụ gị n'ụlọnga. Ya e ji mara ya bụ na kpụrụ ụfụfụ nwere ike na-etolite a na-echebe film n'elu nke pola mmiri mmiri mmanụ ụgbọala, na film nwere ike ichebe elu ụfụfụ si na-mebiri emebi ma si otú na-egwu a ọrụ nke ọkụ emenyụ. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị na imenyụ pola mmiri mmiri mmanụ ọkụ, ma na-emenyụ ọkụ na-na mmanụ na mmanụ ụgbọala ọkụ. The ngwaahịa extinguishes ọkụ emenyụ larịị ⅢC nke nonpolar mgbaze ọkụ na ARⅠB ọku emenyụ mgbaze ọkụ. N'ihi ya, ọ nwere a multi-ọtọ okike.
Executive Standard Number: GB15308-2006 " ụfụfụ ọku emenyụ gị n'ụlọnga "
Ìhè odo tapawa
Nkezi (20 ℃ ), g / cm3
Ọ dịghị anya stratification na heterogeneity
Flow dị ukwuu karịa ọkọlọtọ akwụkwọ ngwọta
asụ ụfụfụ multiple
The ndiiche si eigenvalue adịghị aka 1.0 ma ọ bụ ukwuu karịa eigenvalue 20%
25% drainage oge .min
Ndiiche si e ji mara uru bụ karịa 20%
E xtinguishing oge (acetone), min
Anti-ere ọkụ oge (acetone), min
Emenyụ oge (120 # mgbaze mmanụ), min
Strong nkedo ≤ 3, onye na-adịghị nkedo ≤ 5
Anti-ere ọkụ oge (120 # mgbaze mmanụ), min
Ngwa ngwa ntọhapụ ≥ 10
Juruoyi mgbe, ℃
N'ime eigenvalue - 4 º
Operating okpomọkụ, ℃
Juruoyi ebe +5 ~ 40
The ọkụ emenyụ gị n'ụlọnga nwere ike ga-eji na a dịgasị iche iche nke ala-na-na-asụ ụfụfụ ọku emenyụ usoro na ọhụrụ mmiri site 6:94 ruru ụfụfụ agwakọta ọkụ. Ọtụtụ-eji nnukwu chemical osisi, chemical eriri osisi, mmanụ ụlọ ọrụ, chemical ngwaahịa nkwakọba ọkụ na akụkụ ndị ọzọ nke nchebe. Ngwaahịa a bụ mụ, ndị na-abụghị na-egbu egbu, na-abụghị corrosive, dị ka splashed n'ime n'anya ma ọ bụ na anụ ahụ, asa na mmiri.
Nke a ọkụ na-emenyụ gị n'ụlọnga ngwaahịa ngwọta kwesịrị echekwara na ihere okpomọkụ n'okpuru 45 ° C na n'elu ya kacha nta ọrụ okpomọkụ. The ngwaahịa na-anọkwasị na ịchekwa n'elu ebe a oge nke afọ abụọ.
-Achọ ezigbo ụfụfụ emenyụ Ukwu Manufacturer & soplaya? Anyị nwere a dum nhọrọ nke na-ahịa na-enyere gị na-okike. All na Anti-soluble ụfụfụ emenyụ Ukwu bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Types of ụfụfụ emenyụ Agents. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Product Categories: Firefighting ntụ ntụ
ABC akọrọ ntụ ntụ ọkụ emenyụ gị n'ụlọnga (75)
Environmental ABC akọrọ ntụ ntụ ọkụ emenyụ ...
ABC ọkasị mma powder ọku emenyụ gị n'ụlọnga
3% mmiri na-akpụ ụfụfụ ọku emenyụ gị n'ụlọnga
Fluoride ụfụfụ emenyụ gị n'ụlọnga 6%
ABC akọrọ ntụ ntụ ọkụ emenyụ gị n'ụlọnga (50%)